Siem Reap dia mandray ireo mpizahatany sinoa amin'ny sandry malalaka
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Siem Reap dia mandray ireo mpizahatany sinoa amin'ny sandry malalaka
Tsapan'ny tompon'andraikitra misahana ny fizahan-tany any Sina fa mirona hanohitra ireo mpizahatany sinoa izao tontolo izao ary manonofy ratsy ny maro ny dia. Ny tompon'andraikitra sinoa dia miresaka momba ny firenena tsy tia namana tafahoatra.
Any Korea atsimo, nanomboka nipoitra ny takona teo am-baravarankiran'ny trano fisakafoanana nilaza hoe, “tsy avela ny sinoa.” Ny casino any amin'ny firenena mikarakara mpitsidika vahiny dia nilaza fa tsy manaiky vondrona mpizahatany intsony avy any Shina. Maherin'ny antsasaky ny olona no nanao sonia fanangonan-tsonia, natolotra ny governemanta, miantso fandrarana ny mpitsidika avy any amin'ny firenena manodidina 1.4 miliara.
Ny praiminisitra Kambodziana Hun Sen tamin'ny talata dia nilaza fa ny fepetra faran'izay henjana ataon'ny firenena sasany hifehezana ny valanaretina coronavirus dia miteraka fanavakavahana sy tahotra, izay "mampidi-doza kokoa noho ilay virus coronavirus", hoy i Xinhua.
Ny trano fandraisam-bahiny sasany any amin'ny faritany Siem Reap (avaratr'i Kambodza Kambodja) dia nandray ny mpizahatany sinoa fotsiny fa nanome fihenam-bidy. Ny vahoaka Kambodziana dia tsy manavakavaka ireo mpizahatany sinoa sy mpampiasa vola.
Manakaiky ny maro Sinoa notsidihina ho an'ny tanjona ara-barotra ho fahafinaretana tamin'ny taon-dasa, araka ny tatitra, na 936,000 sy 1.08 tapitrisa.
Ireo mpitsidika sinoa dia nisaron-tava fandidiana manga maivana rehefa nitety ny simba tamin'ny Angkor Wat izy ireo, izay mazàna tototry ny mpizahatany sinoa mandritra ny fetin'ny taom-baovao fa nangina indrindra tamin'iny herinandro lasa iny.
Ny talata teo dia orinasa 300 mahery tany Lao no nanolotra 500,000 $ mahery tamin'ny hetsika iray tany Laos hanohanana ny ady ataon'i Shina amin'ny valanaretina virus coronavirus ary miaraka amin'izay ny mpitsidika sinoa.
Nilaza ny praiminisitra Malaysia Mahathir Mohamad fa ny governemanta malay dia hanome fanampiana, raha ilaina, amin'ny endrika sakafo sy kojakoja ara-pahasalamana ho an'ny faritanin'i Hubei, ny ivon'ilay valanaretina, ary ireo faritra hafa ao Shina.
Tany Danemarka, ny Masoivoho Sinoa dia niantso ny gazety Jyllands-Posten ao amin'ny firenena mba hiala tsiny amin'ny sarimiaina fanontana izay maneho ny sainan'i China miaraka amina mariky ny virus fa tsy kintana amin'ny fiaviana mena.
Ireo manana razambe sinoa, fa tsy avy any Chine, dia tojo fihetseham-po mahery vaika ihany koa. Any Sri Lanka, vondrona mpizahatany iray avy any Singapour - izay ny ankamaroan'ny olona manana razambe sinoa - dia voarara tsy hianika ny manintona an'i Ella Rock noho ny fisehoany, araka ny filazan'i Tucker Chang, 66, iray amin'ireo mpizahatany. Tsy nisy na iza na iza tamin'ity vondrona ity nanana tantaram-pitetezana tany China farany teo.
Tany Frantsa, ny minisiteran'ny raharaham-bahiny dia nanoro hevitra ireo sekoly sy oniversite hanemotra ny fifanakalozana mpianatra amin'i Sina. Farafahakeliny sekoly ambaratonga faharoa iray any Paris no nisintona ny fanasana ho an'ny vondronà mpianatra kasaina ho tonga amin'ity herinandro ity.
Tany Canada, nanomboka ny fanangonan-tsonia ny ray aman-dreny any amin'ny faritra avaratry ny Toronto mba hanery ny sekoly hanery ireo mpianatra izay niverina avy tany Chine hijanona ao an-trano mandritra ny 17 andro farafahakeliny mba hialana amin'ny mety hanaparitahana ilay aretina. Ny fanangonan-tsonia dia nahazo sonia efa ho 10,000 tao amin'ilay faritra, izay misy foko-Sinoa sy Aziatika marobe.
Coronavirus sitrana tany amin'ny firenena 8
Hiverina any Beijing? 14 andro no nandidiana quarantine